PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - KUNCONYWE AMAGALELO KA-EDNA MOLEWA
KUNCONYWE AMAGALELO KA-EDNA MOLEWA
UMENGAMELI wezwe, umnu Cyril Ramaphosa, uthe kufanele unkk Edna Molewa obengungqongqoshe wezemvelo kuzwelonke, ahlonishwe ngendondo esemqoka ngenxa yeqhaza lakhe ekuvikelweni kwemvelo.
Umnu Ramaphosa usho lokhu ekhuluma emngcwabeni kankk Molewa, izolo epretoria. Uncome kakhulu iqhaza lakhe (unkk Molewa) ekuvikelweni kwezilwane eseziyivela kancane, nemvelo jikelele.
“Kumele ngelinye ilanga ahlonishwe ngenobel Peace Prize ngemizamo yakhe yokuvikela obhejane. Kungumsebenzi wethu ukugcina izwe lihlanzekile ukumhlonipha. Akakaze ashintshe ekuzimiseleni kwakhe ekuvikeleni abantu nokuyinto okumele siyi- lungise ukuze abantu bakwazi ukusethemba futhi, sibuyele ezimiselweni zethu zakudala njengoba ebehlale esho.
"Umhlabathi onothile esiwakhele, ulwandle olusizungezile nezemvelo esiphila ngaphansi kwazo, kumele sikunikelele kuyena ngenhlonipho.
"Siyamkhulula ngoba namuhla useyohlala nezinye izigagayi zethu zesifazane,” kusho uramaphosa ebalula ulillian Ngoyi, Albertina Sisulu, Winnie Madikizela Mandela nabanye.
Unkz Bathabile Dlamini, ohola uphiko lwabesifazane kwiANC, uthe nakanjani igama likankk Molewa kuzomele lifakwe emqulwini abawuhlelayo obizwa nge-100 Phenominal Women.
Phakathi kwabebethamele umngcwabo, bekukhona nabo bonke omengameli BE-ANC abasaphila abake bahola izwe. Unkk Molewa ushonele epretoria Hospital, emuva kokuxinwa yisifo esaziwa ngele-legionnaires nokuwuhlobo lwe- pneumonia, embambe emuva kohambo lwasechina njengoba ebesethimbeni ebeliphelezele umnu Ramaphosa ekuqaleni kukamandulo (September).
Ubengomunye wabaholi bezwe bokuqala abangene kwiphalamende lokuqala ngaphansi kwenkululeko ngo-1994 egxile kuzo ezemvelo nezokuvakasha. Ubeyilungu lesigungu esiphezulu se-african National Congress. zowakha@ilanganews.co.za
ISITHOMBE: SA GOV NEWS
OBENGUNGQONGQOSHE wezemvelo, unkk Edna Molewa, ofihlwe izolo, utuswe yizo zonke izikhulumi. Umengameli Cyril Ramaphosa uthe kufanele ahlonishwe ngendondo esemqoka ngenxa yemisebenzi yakhe.